Guurtida iyo Wakiilada oo wakhtiga loo kordhiyay - BBC News Somali
Guurtida iyo Wakiilada oo wakhtiga loo kordhiyay
7 Sebtembar 2010
Image caption Golaha Guurtida Somaliland waxa uu wakhtiga u kordhiyay Wakiilada iyo Guurtida
Golaha guurtida ee Somaliland ayaa maanta cod aqlabiyad ah muddo kordhin ugu sameeyay golaha wakiilada iyo golaha guurtida oo xilligoodii hore dhaamaad yahay.
Fadhiga maanta ee golaha guurtida waxaa fadhiyay 68 mudane 82ka mudane ee uu ka koobanyahay golaha guurtida somaliland.
Cod qaadis gacan taag ahayd ayaa 65 mudane waxay isku raaceen in golaha wakiilada ee
Somaliland loo kordhiyo laba sano iyo siddeed bilood oo ka bilaabaneysa mudada dhammaadka xilkooda oo ku eg 29ka Oktoober 2010, sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka kowaad ee golaha guurtdu ahna ku simaha gudoomiyaha Sh. Axmed Sh. Nuux Furre .
Waxaa kaloo isla codqaadistaasi aqlabiyadda ah golaha guurtidu ku go'aamiyay in golaha guurtidana loo kordhiyo saddex sano iyo siddeed bilood oo ka bilaabaneysa mudada dhammaadka xil kordhintoodii hore oo iyana ku eg sida ku simuhu caddeeyay dabayaaqada bisha oktoober ee 2010 .
Golaha guurtida Somaliland waxay kaloo codeyntaasi ku go'aamiyeen in doorashada golayaasha deegaanada ee magaalooyinka oo hore waqtigoodii u dhammaaday in doorashadoodu ku qabsoonto hal sano iyo lix bilood gudahooda laga bilaabo maanta 7da September 2010 ee codqaadistu dhacday .
Codqaadistan muddo kordhinta golayaasha dawladda somaliland laba mudane oo keli ah ayaa diiday 68ka mudane ee fadhiyay fadhiga golaha guurtida ee maanta .
Madaxweynaha Somaliland ayaa shalay qoraal uu usoo qoray golaha guurtida ugu soo jeediyay inay muddo kordhin u sameeyaan golayaasha wakiilada iyo guurtida maadaama aan doorasho qabsoomeyn waqtigoodiina dhammaad ku dhowyahay.
Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID ayaa ku tilmaamay muddo kordhintan tallaabo ka hor imaneysa dimuqraadiyadda oo golayaasha iyo xukuumaddu muddo dheer kordhiyeen.
Gudoomiyaha Xisbiga UCID feysal Cali waraabe ayaa wuxuu kaloo sheegay inaanay Maslaxadda Somaliland ku jirin waqtigan dheer ee golayaashu isu kordhiyeen ayuu yiri.
Ku simaha gudoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UDUB Axmed Yuusuf yaasiin ayaa isaguna sheegay in saddexda xisbi ee UDUB , Kulmiye Iyo UCID iyo guddiga doorashooyinka laga sugaayay talooyin 15ka bishan September oo la xiriira muddo kordhinta golayaasha , hase yeeshee ayuu yidhi muddo kordhintan maanta la sameeyay Ay tahay mid aan macquul ahayn oo lagaga hordhacay wada tashigii socday.
Axmed Yuusuf Yaasiin wuxuu ku eedeeyay Madaxweyne Axmed Siilaanyo inuuGawracay - waa siduu hadalka u dhagyee- taladii ay ahayd in dib la isugu soo noqdo.